Global Voices teny Malagasy · 3 Desambra 2012
Tantara tamin'ny 03 Desambra 2012
Azia Afovoany sy Kaokazy 03 Desambra 2012
Tamin'ny 1 Desambra 2012, tao anaty hetsi-panoherana sy korontana i Enrique Peña Nieto no nanao fianianana ho filohan'i Meksika. Nampiasa ny media sosilay ireo mpisera amin'ny aterineto mba hampahafantarana ny mikasika ireo fifandonana tamin'ny polisy.
Indro fa nanomboka tamin'ny 1 Desambra ihany ny Fampandrosoana an'i Amerika Latinina 2012 (#DAL2012). Tamin'ity taona ity ny hackathon rezionaly nomanin'ny Ciudadano Inteligente (Olompirenena Maranitra) Foundation [en] dia nentina tany amin'ny [en] firenena Amerikana Latinina 8: Arzentina, Bolivia, Brezila, Chile, Costa Rica, Meksika, Però ary Orogoay. Indro zaraina ny tatitry ny andro voalohany.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 03 Desambra 2012
Azia Atsinanana 03 Desambra 2012
Miaraka amin'ilay ady izay tsy mampiseho mihitsy marika fisiàna fitonitoniana ary ny serasera manjary miha-sarotra na tsy azo antoka intsony, nisy "fanentanana ho fanehoana firaisankina [ar] amin'ireo vahoaka Siriana" natomboka tao amin'ny aterineto. "This Is Damascus!" na "Damaskaosy Ity" no anarany